Nezvedu - Chuzhou Meiko Magnetics Co., Ltd.
Magnetic Firita Sisitimu
Magnetic Kuvhara Sisitimu
Magnetic Kugadzirisa Plates
Precast Konkrete Zvishongedzo
Magnetic Kubata System
Rabha Coated magnets a
Wako Akavimbika Magnetic Solutions Mupi
Meiko Magnetics yakagara ichizvichengeta mupfungwa kuti "hunyanzvi, hunhu uye zvinodiwa nevatengi ndiwo mabwe emakona ebhizinesi". Isu tinotarisira kuti hunyanzvi hwedu mumagineti magungano anogona kukwanisa ako akanaka mazano
Metal Kucheka Muchina
Pot Magnet Simba Kuedzwa
Precast Magnets Zvandakashanda
Unyanzvi Hwedu & Hunyanzvi
Nezvibatsiro zvevashandi vedu vane hunyanzvi uye zviitiko zvakakura mukugadzirwa, isu, Meiko Magnetics, tinokwanisa kugadzira, kusimudzira nekugadzira ese ako akarota magineti ekushandisa. Isu tinonyanya kugadzira magineti ekubata masisitimu, magineti firita system, yemagetsi inovhara maindasitiri mazhinji, anowanzoita seanoshanda sekutsvaga, kugadzirisa, kubata, kutora, kupatsanura zvinhu zvine mutsindo kubva pazvinangwa.
-Magnetic denderedzwa / kuyerera dhizaini
-Sheet simbi inoshanda
Unogona kuwana ese akakura ndfeb magineti magungano pano
Chuzhou Meiko Magnetics Co., Ltd.
Bvunza FOR PRICELIST
Nzira yekugadzira Sintered Neodymium Magnets?
Sintered NdFeB magineti chinhu chiwanikwa magineti yakagadzirwa kubva Nd, Fe, B nezvimwe simbi zvinhu.Iyo ine yakasimba magineti, yakanaka yekumanikidza simba. Inoshandiswa zvakanyanya mu mini-mota, ...
© Copyright -Chuzhou Meiko Magnetics Co., Ltd. db2020. Kodzero Dzese dzakachengetedzwa.